दोरम्बा गाउँपालिकामा सडक निर्माणले गति लियो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
दोरम्बा गाउँपालिकामा सडक निर्माणले गति लियो
पुष २२, २०७४ 1723 ऊर्जा खबर/रामेछाप
रामेछापको दोरम्बामा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिएको छ । स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणका काम सुरु गरिएको हो ।
दोरम्बा गाउँपालिका सडकले छोए पनि हिउद वर्षा नै सहजरूपमा यातायात सञ्चालन गर्न समस्या छ । गाउँपालिकाले १२ महिना सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने उदेश्यअनुसार निर्माण र स्तरोन्नती सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तानले बताए ।
७ वडा रहेको गाउँपालिको केन्द्र टोकरपुरदेखि वडा कार्यालयसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ, उनले भने, ‘यातायातले नजोडदासम्म जनताले विकासको वास्ताविक अनुभूति गर्न सक्दैन ।’
गाउँपालिदेखि जिल्ला सदरमुकाम मन्थली र राजधानी जोडने मुख्य सडकको रूपमा रहेको दोरम्बा–अग्लेश्वर हुँदै गाल्वासम्मको सडक धमाधम स्तरोन्नती भइरहेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको छ ।
पाँच किलोमिटर स्तरोन्नती गर्ने काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उदय रानाले जानकारी दिए । सडक मानेडाँडा हुँदै गाउँपालिका केन्द्र टोकरपुरसम्म जोडिएको छ । गाल्वा–दोरम्बा खण्ड चौडा गर्ने र जोखिमपूर्ण स्थानमा पर्खाल तथा ग्याबिङ हाल्ने र सोलिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।